Affiliate Marketing, Digital Marketing, Opportunity
by Anuj Bhai May 04, 2020
इलाइट भर्सन फाइबर ट्रेनिङ
इलाइट भर्सन फाइबर ट्रेनिङ बुझ्नको लागि फाइबर ट्रेनिङको बारेमा बुझ्न जरुरी छ ।
के हो ! त फाइबर ट्रेनिङ ?
कसै–कसैको लागि फाइबर ट्रेनिङ नौलो विषय पनि हुन सक्छ । यसको बारेमा विस्तृत जान्नको लागि फाइबरको स्थापना कहिले भयो ?
फाइबर किन स्थापना भयो ?
फाइबर कसरी स्थापना भयो ?
यस भित्र के के कामहरु गर्न सकिन्छ ?
फाइबरको बारेमा एउटा भनाई छ– Freelancer market place for freelancer Service। भन्नुको तात्पर्य तपाईं कुनै पनि काममा दक्ष अथवा विज्ञ हुनुहुन्छ भने त्यसको स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न चाहनु भयो भने तपाईं गर्न सक्नु हुन्छ । हो, त्यो अवशर फाइबरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
इजरायलका उद्योगी मिका काउफमेनले २०१० को फेब्रुअरी १ तारिखमा फाइबरको स्थापना गरेका हुन् । काउफेनले विश्वलाई हेरेर भन्दा पनि तत्कालिन अवस्था इजरायलकै एउटा शहर (जहाँ मिका काउफेनको उद्योग थियो) लाई लक्षित गरेर यसको स्थापना गरेका थिए । तर, चाँडै नै फाइबरले विश्वव्यपि रुपमा व्यापकता पाउन सफल भयो । आजको दिनमा यसको क्षेत्र विश्वव्यपी भए पनि विशेष गरि दक्षिण एसियाली मुलुकका युवाहरुले फाइबरमा निकै राम्रो काम गरिरहेको देखिन्छ । साथै उनीहरुले राम्रै आम्दानी गरिरहेको पाइन्छ । यस हिसाबले पनि फाइबर डटकमले दश वर्षको अवधिमा निकै लामो फड्को मारेको मान्न सकिन्छ ।
यदि तपाइसँग वेभ डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, भिडियो इडिटिङ, कन्टेण्ट राइटिङ, सफ्टवेय डेभलपिङ, मोबाइल एप्लिकेशनस, लोगो डिजाइनजस्ता कुनै पनि विषयमा राम्रो ज्ञान भएको खण्डमा तपार्ईं स्वतन्त्र ढंगले फाइबर डटकममा काम गर्ने अवशर पाउन सक्नुहुन्छ । तपाइसँग त्यस्तो कुनै सिप भए समयको कुनै परिधिभित्र नरहि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न अवशर फाइबरले प्रदान गर्दै आएको छ । यसको लागि तपाईले ‘गिग’ बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
Start Your Business Here : Click Here
यदि तपाई लोगो डिजाइनमा पोख्त हुनुहुन्छ भने, म राम्रो लोगो डिजाइन गर्न सक्छु, एउटा लोगा बनाए वापत न्युनतम पारिश्रमीक यति निश्चित रकम तोक्न सक्नुहुनेछ । यस्तै अन्य भिडियो इडिटिङ, ग्राफिक डिजाइन, वेभडिजाइन लगायतका विषयमा व्यवसायीक हुनुहुन्छ भने भने तपाईको कामको मूल्य शुरुका दिनहरुमा सामान्य पाँच डलर देखि माथि दश, बीस, पच्चिस डलर तपाइको मिहिनेत र कामको उत्कृष्टताको आधारमा बढाउन सक्नुहुन्छ । शुरुका दिनहरुमा तपाइले थोरै लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ । निरन्तर काम पाउन थालिसकेपछि आफ्नो काममा निक्खारपन आउन थालेपछि विस्तारै तपाईको दर/रेट बढाउँदै लान सक्नुहुन्छ । तर, हरेक अर्डरलाई समयमा नै डेलिभर गर्नुसक्नु पर्दछ । फाइबर कम्पनी विगत दश वर्षसम्म सफलता पूर्वक आइरहेको छ ।
जुन १३,२०१९ मा न्यूयोर्क स्टक एक्चेञ्ज मा लिस्टेट भएर यसलाई फाइबरले प्रमाणीत गरिसकेको छ । यो अवस्थासम्म आइपुन मिका काउफेनले धेरै आलोचनाहरु खेप्नुप¥यो । धेरै चुनौतिहरुको सामना गर्नुप¥यो । कहिले फेक रिभ्यु भयो भनेर विरोध गर्थे त कहिले फेक कन्टेण्टहरु प्रोमोट ग¥यो भनेर आलोचना गर्नेहरु धेरै थिए । यो फेक सर्भिस हो भन्नेहरुको जमात पनि उत्तिकै थियो । अन्य कम्पनीहरुले पनि फाइबरलाई बदनाम गर्न खोजेका थिए । यति धेरै समस्यहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै यहाँ सम्म आइपुगेको छ फाइबर डटकम । यस्तै समस्यहरु फेसबुक डटकमलाई पर्दै आएको हामीले बेलाबेलामा देखिरहेका छौं । यसर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हरेक वस्तुको सकरात्मक र नकरात्मक दुवै पक्षहरु हुन्छन् । हामीले काम गर्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा नकरात्मक कुराहरु पनि आउलान सधैं–सधैं सकरात्मक परिणाम नै आउँछ भन्ने होइन । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हामीसँग अनिवार्य रुपमा हुन आवश्यक हुन्छ । यहि कुरा मिका काउफेनको संघर्षले हामीलाई सिकाउँछ ।
फाइबर डटकममा कुन विषयसँग सम्वधित कामहरुको माग छ ?
फाइबरको कुन–कुन प्रजेक्टमा बढि भुक्तानी हुँदै आएको छ ? यस विषयमा अमेरिकन पेइड टेलिभिजन सिएनबिसीले केहि समय अगाडी प्रसारण गरेको समाचार अनुसार सबै भन्दा धेरै भुक्तानीहुने फाइबर डटकमको भिडियो इडिटिङलाई लिएको छ । तपाईले कुनै कम्पनीको बिजनेश भिडियो इडिटिङ वा इभेण्टको भिडियो इडिटिङ गर्नुहोस यस्तै किसिमका भिडियो इडिटिङको कामहरु फाइबर डटकमले गरिरहेको छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि अन्य वेभ डिजाइन, लोगो डिजाइन, मोबाइल एप्लिकेसन्सहरुमा कामै हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा एउटा आँकडाले देखाएको मात्र हो त्यो रिपोर्ट । हरेक क्षेत्रमा यसको डिमाण्ड आइनै रहेको हुन्छ ।
अनुजभाइडटकमले किन ल्यायो त इलाइट भर्सनको फाइबर ट्रेनिङ ?
नेपालको पहिलो समस्य नै बेरोजगार हो । यहाँ प्लस टु देखी स्नातक तहका विद्यार्थीहरु केहि गर्न चाहना भएर पनि कामको अवसर पाइरहेका छैनन् । कतिपयसँग कुनै औपचारिक सीप पनि छैन । उनीहरुलाई नै मध्यनजर गरेर अनुजभाइ डटकमले यो ट्रेनिङ ल्याएको हो । साथै कुनै विषयमा सीप भएका (विशेष गरि ग्राफिक डिजाइन र भिडियो इडिटिङ) ब्यक्तिहरुले पार्टटाइम काम गर्न चाहेमा पनि यो उत्तम विकल्प हुनसक्ने हामीले अनुमान गरेर यसको प्रबद्र्धन गरिरहेका छौं ।
यदि तपाइसँग त्यो सीप छैन भने अनुजभाइ डटकमले इलाईट भर्सनको फाइबर ट्रेनिङ तपाइलाई उपलब्ध गराउनसक्ने छ । जहाँ भिडियो इडिटिङ, वेभ डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइन लाई समेटिएको छ । जुन तपाई घरमै बसेर सिक्न सक्नुहुनेछ । यसको लागि तपाईलाई कम्प्युटर/ल्यापटप र इन्टरनेटको सुविधा अनिवार्य चाहिन्छ । भिडियो इडिटिङको लागि त्यहि किसिममो कम्प्युटरको आवश्यकता हुन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था नभए सामान्य फोटोशप चलाएर ग्राफिक डिजाइन र वेभ डिजाइनिङको कोर्ष तपाईले लिन सक्नु हुनेछ । तपाईले सके तीनवटै सिक्दा राम्रो तर त्यस मध्येको एउटा मात्र सिकेर दक्ष हुनुभयो भने पनि तपाईको लागि अवशरहरु प¥याप्त छन् । तपाई हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, सिक्दा आफ्नो अन्तष्करणबाटै सिक्ने इच्छा हुन जरुरी छ ।
फाइबरमा के तरिकाले काम पाइन्छ ? कसरी आफ्नो प्रोफाइल मेन् टेन गर्ने ? कसरी प्रोफाइल तयार गर्ने ? के तरिकाले गिग बनाउने ? यसको प्रोमोशन कसरी गर्ने ? अर्डर आइहाल्यो भने कसरी पुरा गर्ने ? यसको परिमाण कसरी धेरै बनाउने ? भन्ने विषयको जिज्ञासाहरुलाई पुरा गर्न तपाईले फाइबर ट्रेनिङकै विषयवस्तुहरुसँग सँगै सिक्न सक्नु हुनेछ । यदि कसैलाई त्यसको बारेमा समस्य रहेमा त्यसको समाधानको लागि हामीले लाइभ सपोर्ट टिमको पनि व्यवस्था गरेका छौं । जहाँ तपाइले नबुझेको कुनै पनि प्रश्नहरु लाइभमा पाउनुहुनेछ ।
यदि तपाई अलि छिटो आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई एफिलिएट प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई नेपालमा संभवतः पहिलो पटक अनुजभाई डटकमले यो अवशर लिएर आएको छ । विशेष गरि डिजिटल प्रडक्टहरुलाई अनुजभाई डटकमसँग एफिलिएट भएर डिजिट मार्केटिङको माध्यमबाट आम्दानी गर्ने अवशर दिइरहेका छौं । नेपालमा अनुजभाई डटकम भन्दा अरु कुनै कम्पनीले अहिले सम्म यो सुविधा प्रदान गरेको सुन्नमा आएको छैन ।
यो फाइबर कोर्ष पनि डिजिटल प्रडक्ट नै भएको हुनाले तपाइले यसलाई अनुजभाई डटकमसँग एफिलिएट भएर फाइबर कोर्षहरु मार्केटमा सेल्स गरेर पनि तपाई आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसको लागि तपाइलाई अनुजभाई डटकमको एफिलिएट लिंक चाहिन्छ । त्यसको लागि तपाई जो कोहि ब्यक्तिहरुले हाम्रो कोर्ष किन्नुहुन्छ, उहाँलाई हामी एफिलिएट लिंक उपलब्ध गराउँछौं । त्यहि एफिलिएट लिंकको माध्यमबाट एफिलिएट लिंकलाई सामाजिक संजालका विभिन्न माध्यहरु फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ल्लगिङ जस्ता कुनै पनि माध्यमद्वारा प्रोमोशन गर्नु भयो भने तपाइलाई आम्दानी गर्ने ठाउँ पनि छ । यसो गर्दा तपाइले ६५ प्रतिशत भन्दा बढि कमिसन तपाइले पाउन सक्नु हुनेछ ।
यसो गर्दा तपाईलाई दुवै तिर फाइदा लिने अवसर रहेको छ । एकातिर फाइबरको कोर्ष लिएर सिकेर फाइबरमै काम गर्ने अवसर अर्काेतिर त्यहि कोर्षको डिजिटल मार्केटिङ गरेर कमिसन मार्फत कमाउने अर्काे अवशर । त्यसो भएको हुनाले तपाइले फाइबरको कुनै पनि कोर्ष खरिद गरेर कुनै एउटा वा दुवै आम्दानीका माध्यमहरु रोज्ने तपाइलाई नै जिम्मा दिइरहेकोछ, अनुजभाई डटकमले ।
Tags: Anuj Bhai Blog, best business in nepal, business idea in nepal, business nepal, earn money online in nepal, good business in nepal, how to make money online in nepal, how to start online business in nepal, Internet Marketing, Internet Marketing In Nepal, make money online in nepal, Nepalese Internet Marketer Story
Hajur dherai helpful presentation sir.
Sagar Pratap Aryal
Ekdum ramro lagyo sir ko information..
Thank you very much Sagar Ji
it will be fruitful for unemployed and employed youth, i like the way you are in
I found this information really helpful .I want to develop my skills and knowledge in this field and of course career also.Sir I am just +2 graduate aged 21 and presently I am zero in these sorts of work.Would it still be okay to seek career in this field?Sir plz help me in this matter.
Thank you brother ! Pls connect on http://www.facebook.com/jrmarketing777